Qaylo-Dhaan: Maanso Xeel-dheer oo ka Hadlaysa Abaaraha | Araweelo News Network
Qaylo-Dhaan: Maanso Xeel-dheer oo ka Hadlaysa Abaaraha
Abwaan Xasan Dhuxul (Laabsaalax).
Dorraad ruuxii Dhulka doog iyo Duunyo fooftiyo ku ogaa dallag Dadku beertaan Wakhti doorshaa taa ka daba yimi.
Kolkii dabar go’a Geedka damalkaa Dhuxul doonaha Loogu daw galay ee dadkaygoow Dhulka dambi iyo Dulmi laga galay, Daruur curatiyo Roob darrooriyo Cirkii di’i jiray Dhibic daayoo Dabaylaa kacay.
Sidii Daba-dheer Abaar daran oo ka sii digo kulul Kuwii duro dhacay, Wataa dubatee Kol ay duunyiyo Dadka nool tahay Dalkii xaadhee.
Doc shisheeyiyo Inta dibadaha Isla dagganee ka dareen liyo Dalka joogaha Dugsi nabadiyo Daaro dhaadheer ku dakeeyoow.
Qof damiir lihi Kuma daawado oon dadkiisii Badhkood dilayee Miyaad dar Ilaah Ugu damqataan Miyaad dar Ilaah u daryeeshaan Miyaad dar Ilaah Kol ay dayn tahay Wuxuun u dirtaan.
Miyuu degganaan Dadku ladayaa Haddii dagalkaba Duunyo fooftiyo Xoolo daaqiyo Maal ka dabar go’o Caano darayiyo Miyaa dufan iyo Dubaax iyo jiidh Dollar lagu heli Fakhri dabadii Dab miyuu bixi Saw dam maahoo Gabal uma dumin Deegaankeennii Khayraad dihin iyo Durdurka lahaa.
Marka roob-doon Dadku oogaan ey si daacada u ducaystaan Quluub daahira Daayin ma qadshee Adaa duulyohow Xaqa dadayoo Uurka dabayoo Khayrka diidoo Dalaal raacee Dib isugu noqo, Deeqdu ma fogee Adaa dalab lehe Dawga saxan raac.
Diin gurguurtiyo Haadda duushiyo Inta deridiyo Duudda joogtiyo Duurgaleenkiyo Badda doobida Inta dacal dacal Dhex dawaaftiyo Dooxo godan iyo Didib iyo Buur Inta daaqdee Darba caynyahay Nafle dul ahaan Dalqo waxa gala Adaa daayiman Ugu deeqoon Mar ka daynine.
Cirkan daahmee Daruur hoortiyo Doogsintii gabay, Adaa deeqloow Markaad doontaba soo da’siiyee Midaan danab iyo Wuxuu dumiyiyo Daad wax qaadiyo Duufaan iyo dhagax Dabaylo lahayn Caano da’aya ah Diihaal reebtiyo Doogsan bixisiyo Omos damiyiyo Dhul daweeyiyo Raxmad daahira Daruurihii guga Adaa deeqloow Dadka u hayoon Kaaga dalabnnee Degdegu noo sii.